Karọt | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Mkpụrụ kacha mma maka mpaghara Moscow
Mkpụrụ vaịn anọwo na-akwụsị ogologo oge ọbụna maka ndị bi na Central na Northern Region. A sị ka e kwuwe, ọbụna n'oge obere oge okpomọkụ, ọ ga-ekwe omume ibute ọ bụghị naanị ụdị dị iche iche na oge na-agba ọsọ ngwa ngwa, kamakwa ya na ezigbo uto. N'otu oge ahụ, mpaghara ọ bụla enwere ọnọdụ nke ya. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-amị mkpụrụ vaịn na mpaghara Moscow, a ghaghị ịkwụ ụgwọ nlezianya dị oke uru: n'ọnọdụ dị otú a, ọtụtụ ọrịa nke ubi vaịn anaghị egosipụta onwe ha, pests anaghị arụ ọrụ.
Na carrots maka oyi n'oge obibi: ihe kacha mma ntụziaka
Akwụkwọ nri ndị na-egbuke egbuke nwere ọtụtụ uru. Nke a bụ ohere ịzọpụta n'oge oyi, na ichebe vitamin (mgbe niile, onye ọ bụla maara na n'oge oyi akwụkwọ nri na-ere na nnukwu ụlọ ahịa dị iche na nke okpomọkụ na vitamin mejupụtara). Ee, na ịnweta ebuka ga-adịgide adịgide. Banyere ma ọ ga-ekwe omume ifriizi carrots, ma ma ihe ndị bara uru ọ na-abaghịrị ma ọ bụrụ na ọ nwụsịrị, anyị ga-ekwukwa n'ihu.
Kedu ihe ọṅụṅụ bara karọ bara uru maka ahụ mmadụ?
A pụrụ ịtụle ihe ọṅụṅụ karọt dị ka otu n'ime ndị isi n'etiti ndị na-emepụta ihe oriri na-eri ihe ndị dị na ya na mineral na vitamin. Ya mere, a na-atụ aro ka e jiri ndụdụ karọt nke ndụ mee ihe iji kwado ezi ahụike, na maka ọgwụgwọ nke ọrịa dị iche iche. N'otu oge ahụ ọ na-ejikọta ya na akwukwo nri na mkpụrụ osisi.
Otu esi eme ka carrot caviar: usoro nhazi nke ihe ubi maka oge oyi
Ntube maka carot caviar ka e mepụtara na Tunisia, mana ngwa ngwa ọ ghọrọ onye a ma ama na mba anyị. Nri adịghị akpata nnukwu nsogbu, ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla na-arụ ọrụ ụlọ mara otú e si eme ya. Tụlee isi ihe ndị bụ isi. Taste Caviar si carrots dị nnọọ uru maka ahụ.
Esi esi esi nri carrots carrots maka oyi n'oge obibi: otu nchịkọta dị mfe na foto
Igwe carrots ndị Korea na-edozi salad, bụ nke na-esi ísì ụtọ na nke na-esi ísì ụtọ, nke ndị bi n'ebe ndị anyị na-anọghị na-ahụ n'anya. Nke a abughi ihe mgbagwoju anya: na mgbakwunye na uto ihe oriri, efere a nwere otutu uru bara uru. A na-atụ aro ka ị rie ndị na-eri nri na-adịghị mma na vitamin na ihe ndị na-edozi ahụ, ndị na-arịa ọrịa ntachi na ala dị ala, tinyere ọrịa dị iche iche na ọrịa na-efe efe.
Kedu esi esi nri kabeeji na kabeeji n'ụlọ?
Kedu osisi okooko osisi na-eto eto na Urals
Osisi Bonsai: anyi na acho uzo di na foto
Ihe niile gbasara ejiji ịnyịnya